तपाईको राशीवाट अक्षरबाट थाहा पाउनुहोस् तपाईको प्रेम र विवाहको सम्वन्धको बारेमा
नोभेम्बर 30, 2018 नोभेम्बर 30, 2018 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments ज्योतिषशास्त्र, प्रेम, राशी, विवाह
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार सबै १२ राशीका मानिसको स्वभाव अलग अलग हुन्छन् र यी राशीका कारण व्यक्तिका स्वभाव र भविश्य निर्धारण गरिन्छ । राशीको स्वभावका आधारमा हाम्रो सम्बन्ध, दोस्ती, प्रेम प्रसङ्ग पनि निर्भर हुन्छ । आफ्नो नामको शुरुको अक्षरबाट थाहा पाउनुहोस् तपाईको प्रेम सम्बन्ध कुन स्त्री वा पुरुषसँग कस्तो रहन्छ त्यसबारे जानी राखौं ।
जुन मान्छेको राशी मेष हो उसको लागि मेष, सिंह या धनु राशी हुने हरु सबैभन्दा राम्रो हुनेछन् । यिनीहरूको प्रेम सम्बन्ध उत्तम रहन्छ । मेष राशी हुने मानिसको लागि कुम्भ, तुला या मिथुन राशी हुने साथी सामान्य रहन्छन् । यीनको प्रेम सम्बन्ध आपसी तालमेलमा अधिक निर्भर रहन्छ । वृष, कन्या या मकर राशी हुने मानिसकासँग मेष राशीको प्रेम सम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०/५० रहन्छ । मेष राशी हुने मानिसको लागि वृश्चिक, मीन या कर्कट राशीका साथी उत्तम मानिँदैन । यीनीहरुका बीचको प्रेम सम्बन्ध सफलहुने सम्भावना एकदम कम हुन्छ ।
वृष राशी हुने मानिसको लागि वृष, कन्या या मकर राशीका साथी श्रेष्ठ हुन्छ । यीनको प्रेम सम्बन्ध उत्तम रहन्छ । यदी कुनै व्यक्तिको राशी वृष हो र उ कर्कट, वृश्चिक या मीन राशीका साथी रोज्न चाहन्छ भने यो जोडी सामान्य रहन्छ । जो मानिसको राशी वृष हो उनको लागि मेष, सिंह, या धनु राशीका व्यक्तिसँग प्रेम सम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०/५० रहन्छ । वृष राशीका लागि मिथुन, तुला या कुम्भ राशी हुनेहरूका साथ जोडी राम्रो मानिदैन ।
८. बृश्चिक राशी
जुन मानिसको राशी वृश्चिक हो ति मानिसका लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशीका साथी उत्तम मानिन्छन् । यिनको प्रेम सम्बन्ध सफल रहन्छ । वृश्चिक राशीका मानिसका लागि वृष, कन्या या मकर राशीका साथी सामान्य रहन्छ । यिनको प्रेमसम्बन्ध आपसी तालमेलमा अधिक निर्भर रहन्छ । मिथुन,तुला या कुम्भ राशीका मानिसका साथ कन्या राशीका प्रेमसम्बन्ध सफल हुने संभावना ५०–५० रहन्छ । वृश्चिक राशीका मानिसका लागि मेष, सिंह या धनु राशीसँगको मित्रता राम्रो हुँदैन । यिनीहरूको प्रेम सम्बन्धको सफलता पनि कमै संभावना हुन्छ ।
जुन मानिसको राशी मकर हो ती मानिसका लागि वृष, कन्या या मकर राशीका साथी सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । यिनीहरुको प्रेम सम्बन्ध उत्तम हुन्छ । मकर राशीका मानिसका लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशीका साथी सामान्य रहन्छन् । यिनीहरुको प्रेम सम्बन्ध आपसी तालमेलमा निर्भर रहन्छ । मेष, सिंह या धनु राशका मानिसका साथ सम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०/५० रहन्छ । मकर राशीका मानिसक लागि मिथुन, तुला या कुम्भ राशीसँगको सम्बन्ध राम्रो मानिदैन । प्रेम सम्बन्धको सफलता पनि एकदमै कम हुन्छ ।
कुम्भ राशी भएका मानिसका लागि मिथुन, तुला या कुम्भ राशीका साथी उत्तम मानिन्छन । यिनीहरूका बीचको प्रेम सम्बन्ध राम्रो हुन्छ । यदी कुनै व्यक्तिको राशी कुम्भ हो भने मेष, सिंह या धनु राशीका साथी छनौट गरे यी साथीको जोडी सामान्य रहने छ । जुन मानिसको राशी कुम्भ हो उनको लागि कर्कट वृश्चिक या मीन राशीका व्यक्तिका साथ प्रेमसम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०/५० प्रतिशत हुन्छ । कुम्भ राशीका लागि वृष, कन्या या मकर राशी हुनेहहरुको सम्बन्ध राम्रो मानिएको छैन ।
जुन मानिसको राशी मीन हो उसको लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशीका साथी उत्तम हुन्छन् । यिनीहरुको प्रेम सम्बन्ध पनि उत्तम हुन्छ । मीन राशीका मानीसका लागि वृष, कन्या या मकर राशीका साथी सामान्य हुन्छ । यिनीहरुको प्रेम प्रसंग आपसी तालमेलमा अधिक निर्भर रहन्छ । मिथुन,तुला र कुम्भ राशीका मानिसका साथ मीन राशीको प्रेम सम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०/५० हुन्छ । मीन राशीका मानिसका लागि मेष, सिंह या धनु राशीका साथी त्यति उत्तम मानिदैन । यिनीहरूको प्रेम सम्बन्धको सफलताको सम्भावना एकदमै कम हुन्छ ।
← मोटी केटीसँग विवाह गर्दा हुने अचम्मका फाइदाहरु
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार कुन राशीको यौन व्यबहार कस्तो हुन्छ ? →
2 thoughts on “यस्तो छ राशीहरुका वीच हुने प्रेम र विवाहको सम्वन्ध”